E nwere ihe na mkpuchi - ị were ya n'ihi na ị na-aghọta na mkpuchi na uru, ma ọ bụ na unu adịghị n'ihi na unu adịghị enye a ịma banyere onwe gị na ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ị na mgbe e abuana ke ụfọdụ mberede na mkpuchi gị ụlọ ọrụ ngwa ngwa na-abịakwute gị aka ma na-enye gị compensations ekpuchi oge gị na ọnwụ, mgbe ahụ ị ga-enwe ekele maka uru nakwa mkpa nke mkpuchi karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-apụghị enweta a na-enweghị gị insurer. E nwere ọtụtụ edemede na sub-edemede nke mkpuchi atumatu ekpuchi fọrọ nke nta akụkụ nile nke ụmụ mmadụ na ahụmahụ, ma ha niile, ị ga-enwe ndị na-esonụ 5 mkpuchi ekpuchi n'ezie na a ga-nwetara.
i. Health mkpuchi: Ahụ ike gị bụ ihe niile, na gị mkpa n'inweta ya mkpuchi atụmatụ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla mere ná ndụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ịnshọransị na-enye ahụ ike mkpuchi nchịkọta maka mmadụ na ezinụlọ, na ọtụtụ ọrụ nwere otu ahụ ike mkpuchi atụmatụ maka ha ọrụ na-arụ ọrụ. Health mkpuchi bụ nnọọ oké mkpa maka gị wellbeing na ndị set ebumnobi i nwere, na i nwere ike iji ihe ọ bụla nke ndị na-Health Mmezi ahazi (HMO) ma ọ bụrụ na ị na-apụghị wepụ a kpọmkwem Ahụike.
Health mkpuchi atụmatụ na-enye gị na-ekpuchi ihe ọ bụla na mberede ahụ ike bara ma ọ bụ ọdụdọ, na ọ na-elekọta gị ụlọ ọgwụ ego mmefu na. Ọ bụ ezie na unu nwere ike ịkwụ ụgwọ deductibles mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-agụnye usoro ọgwụgwọ dị ka Ịwa ahụ, na ị ka mma na ahụ ike mkpuchi karịa ihe ọ bụla.
ii. Ndụ mkpuchi: Ndụ mkpuchi bụ mkpa, kasị karịsịa ma ọ bụrụ na ị eche nnọọ banyere gị na ezinụlọ gị na dependents na-ịchọrọ ha ndị kasị mma mgbe gị na ọnwụ. Ọ dịghị onye chọrọ ya na ezinụlọ ya na-ata ahụhụ mgbe ọnwụ ya, na nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu nnọọ ekwe omume mgbe i nwere ndụ mkpuchi iwu na ebe. Ọ na-enye gị na ezinụlọ gị na dependents ndị dị iche iche nke ndụ na àgwà agụmakwụkwọ na ị chọrọ ka ha kwesịrị ị na mberede agafe na. Ọzọkwa, na a dum okwu ndụ mkpuchi atụmatụ, i nwere ike iji na-akwakọba ego dị ka a lara ezumike nká atụmatụ ma ọ bụ ọbụna na-aga n'ime ego na ya, mgbe ị nwekwara ike egweri dum ego ọzọ; ma na okwu ndụ mkpuchi na ị bụ naanị eru maka mkpuchi mgbe gị na ọnwụ.
Atọ. Ngwongwo mkpuchi: Ọ dịtụwo mgbe ị na-eche banyere ohi ahụ e zuru, na ọkụ ọdachi? Ị na-chere na nke ọdachi dị ka idei mmiri na ifufe na-ebibi gị ụlọ? Ị chọrọ gị na ezinụlọ gị ga-tụgharịa si n'ime-emeghe n'okporo ámá na bụla bara uru ihe onwunwe na-efu mgbe ọ bụla n'ime ndị a mere eme? Ọ bụ ya mere ị ga-amụma mkpuchi gị n'ebe obibi gị megide ọkụ ọdachi, idei mmiri na ifufe, ohi ahụ e zuru na-ezu ohi, na ndị ọzọ yiri mere.
iv. Nchekwa onwe mkpuchi ụgbọ ala: Ọ bụrụ na i na ụgbọala, mgbe ahụ, ị ​​ga-amara na akpaaka mkpuchi ụgbọ ala mara mma amanyere bụ iwu na a chọrọ nke ala iwu. Ị ga dịkarịa ala-atọ ndị ọzọ mkpuchi na ebe ọ bụrụ na ị ụgbọala na okporo ụzọ, ọ bụ ezie na keukwu iwu cover nnọọ mma. Nchekwa onwe mkpuchi na-echebe gị na-enye ala ụgbọ ala gị nọ na ndị ọzọ ụzọ ọrụ na ụfọdụ cover mgbe ụzọ mberede ụgbọala eme - na nke a nwere ike na-na-egbu egbu.
v. Nsogbu mkpuchi: Nsogbu mkpuchi bụ dịkwa nnọọ mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ breadwinner ezinụlọ gị. Na a nkwarụ mkpuchi atụmatụ, na ị na-kpuchie ke ikpe ụlọ ọrụ mmepụta ihe mberede na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ unan na pụrụ iduga a ọnwụ nke gị aka na ụkwụ, anya ma ọ bụ ọbụna na-ejere gị ghara ịdị irè ma ọ bụ mbọ iji a oche nkwagharị. Mgbe ị na-nkwarụ na-apụghị ịrụ ọrụ ma ọ bụ ilekọta ezinụlọ gị ọzọ, a nkwarụ mkpuchi atụmatụ na-enye gị ụdị ụfọdụ nke-akwụ ụgwọ na ego na-akwado ka na-enweta site.
Tags:5 Major Insurance Covers, 5 Isi Insurance ekpuchi Ị Ga-abụ nwetara
5 Chọpụta Ụzọ Ịzọpụta Big On gị Insurance
Gafere gị ụlọọrụ Sales Target